I-Froala: Yandisa iqonga lakho nge-WYSIWYG yoMhleli weTekisi oTyebileyo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Februwari 19, 2021 NgoLwesihlanu, Februwari 19, 2021 Douglas Karr
Ukuba ukhe waqala phantsi kwendlela yokuphuhlisa iqonga apho ufuna umhleli wokubhaliweyo oyinto oyibonayo-uyifumanayo (UBUME), Uyayazi indlela ekunokuba nzima ngayo. Xa ndisebenza kumboneleli weenkonzo ze-imeyile, umsebenzi wokuphuhlisa kunye nokuvavanya umhleli osebenzayo ukunika impendulo, i-imeyile yomthengi we-imeyile HTML yathatha abaphuhlisi ukukhutshwa okuninzi ukuyilungisa kwaye ichanekile. Akululanga.
Umhleli wombhalo yenye yezinto onqwenela ukuyifaka kwiqonga elenza ukuba umxholo uphucule kakhulu umxholo, kodwa akufuneki ufune iinyanga okanye iminyaka yophuhliso. Umhleli weFroala ngumhleli wombhalo osisityebi okhawulezayo ongenobunzima, owakhiwe kakuhle, okhuselekileyo, kwaye olula kwiqela lakho lophuhliso ukudibanisa konke izikhokelo ezithandwayo.
Iimpawu zomhleli weFroala
Uyilo lwale mihla -Ujongano oluhle lwangoku oluza kuthandwa ngabasebenzisi.
URetina Ulungile -Iinkcukacha ezithe kratya, i-aesthetics kunye neefonti ezibukhali.
imixholo -Sebenzisa okungagqibekanga okanye umxholo omnyama, okanye wenze owakho umxholo usebenzisa ifayile yomxholo ongaphantsi.
Interface Enembile -Umhleli wombhalo osisityebi we-Froala ubonelela ngokusebenza okupheleleyo kusetyenziswa ujongano olunomdla kakhulu oluya kufunyanwa ngabasebenzisi bendalo.
popups -Izinto ezintsha ezinesitayile samava omsebenzisi omangalisayo.
Imifanekiso ye-SVG -Izinto ezenziwe ngaphakathi endlwini ii-SVG icon, ii-icon ezinokubonakala zintle ezibonakala zihle nakweyiphi na ubungakanani.
Uhlobo lesiko Umhleli we-WYSIWYG HTML kuphela kwento enezixhobo ezikhethekileyo zokutshintsha ukujonga kwaye uzive ngendlela ofuna ngayo.
Isixhobo sebar yesiko - Amaqhosha amaninzi kakhulu? Mhlawumbi hayi ngolungelelwano olufanelekileyo? Unolawulo olupheleleyo ekusebenzeni kwesixhobo somhleli kubungakanani besikrini ngasinye.
Ngokwezifiso Zonke iindlela Yonke into inokwenziwa ngokwezifiso okanye yenziwe ngokwesiko: amaqhosha, ukuhla, ukuvela, ii icon, iindlela ezimfutshane.
Ibar yesixhobo esincangathi -Ukunciphisa amava akho okuhlela isixhobo somhleli se-WYSIWYG siya kuhlala phezulu kwesikrini ngelixa uskrolela ezantsi.
Isixhobo se-Offset -Isixhobo se-bar somhleli wesicatshulwa asinyanzelekanga ukuba sihambisane nesihloko kwiphepha lakho lewebhu, setha nje ukuseta kulo.
Ibar yesixhobo emazantsi -Yitshintshe ngokulula indawo ye-WYSIWYG HTML yesixhobo somhleli ukusuka phezulu kuye ezantsi, ngelixa usebenzisa ibar yesixhobo encangathi okanye ukuseta.
Isikrini esiphelele Ukujongana nezixa ezikhulu zomxholo kufuna indawo enkulu yokuhlela. Iqhosha lesikrini esigcweleyo liya kuyandisa indawo yokuhlela kuyo yonke indawo yephepha lewebhu.
Iphepha elipheleleyo Ukubhala kunye nokuhlela iphepha elipheleleyo le-HTML kunokwenzeka. Iluncedo kwii-imeyile, kodwa ayisiyiyo kuphela, ukusetyenziswa kwe-HTML, INTLOKO, iithegi zomzimba kunye nokubhengezwa kwe-DOCTYPE kuvunyelwe.
Iframe Umxholo womhleli we-WYSIWYG we-HTML unokwahlulwa kulo lonke iphepha usebenzisa i-iframe ke ngoko akukho sitayile okanye ukungqubana kweskripthi.
Iimpawu zomsebenzi weFroala Editor
ngokukhawuleza -Amatyeli amathandathu akhawulezileyo kunokuqhwanyaza kweliso, umhleli wombhalo osisityebi uya kuqalisa ngaphantsi kwe-40ms.
KDEName -Ngombindi wayo we-50KB, unokuzisa amava okumangalisa kwi-app yakho ngaphandle kokuphulukana nesantya sokulayisha.
Iplagi esekwe Ulwakhiwo lweemodyuli lwenza ukuba umhleli we-WYSIWYG HTML asebenze ngokukuko, kube lula ukuyiqonda, ukwandisa nokugcina.
Abahleli abaninzi kwiPhepha -Umhleli omnye okanye abalishumi kwiphepha elinye? Awuyi kuziva umohluko, setha nje ukuba ziqaliswe kunqakrazo.
HTML 5 -Umhleli wombhalo osisityebi waseFroala wakhiwe ngokuhlonipha nangokusebenzisa imigangatho ye-HTML 5.
I-CSS3 -Yiphi indlela ebhetele yokuphucula amava omsebenzisi kunokusebenzisa i-CSS3? Iziphumo ezifihlakeleyo zenza umhleli abe mkhulu ngakumbi.
Umhleli weFroala Iimpawu zeSelfowuni
I-Android kunye ne-iOS -Izixhobo ze-Android kunye ne-iOS kuvavanyiwe kwaye kwaxhaswa.
Yenza ubungakanani kwakhona bomfanekiso Umhleli wombhalo osisityebi we-Froala ngumhleli wokuqala we-WYSIWYG HTML onomfanekiso osayizi osebenzayo nakwizixhobo eziphathwayo.
Ukuhlaziya ubungakanani bevidiyo -Owokuqala ukwazisa ubungakanani beevidiyo naxa zidlala. Ewe kunjalo, iyasebenza nakwiselfowuni.
Uyilo loMoya Umxholo owuhlelayo uya kuyiphendula. Umhleli wabo we-WYSIWYG HTML unokubamba ubungakanani bomfanekiso usebenzisa iipesenti.
Ibar yesixhobo nguSayizi yeScreen -Ixesha lokuqala kumhleli osisityebi, i-bar yesixhobo inokwenziwa ngokobungakanani besikrini ngasinye.
Umhleli weFroala we-SEO Iimpawu
Coca i-HTML -I-Froala iphuhlise ialgorithm ecoca ngokuzenzekelayo imveliso ye-HTML yomhleli wombhalo wabo osisityebi. Bhala ngaphandle kokukhathazeka, umhleli we-WYSIWYG HTML uvelisa imveliso ecocekileyo, elinde ukurhubuluzwa ziinjini zokukhangela.
Inkxaso yeAlt Tag -Umfanekiso ongomnye sisicatshulwa esibonisiweyo ukuba isikhangeli asikwazi ukubonisa umfanekiso. Ikwangumbhalo osetyenziswa ziinjini zokukhangela, ke sukungawuthobeli. Esinye isicatshulwa sinokuseta kumfanekiso ohleliweyo wokungena.
Qhagamshela iTayitile yeNkxaso -Ukuba isihloko sekhonkco asaziwa ukuba nefuthe elikhulu kwi-SEO, sinceda abasebenzisi ukuba bahambe ngokulula kwiwebhusayithi yakho. Ayibalulekanga kangako, kodwa kulungile ukuba unayo. Cwangcisa isihloko sekhonkco kwi-popup yekhonkco.
Iimpawu zoKhuseleko zoMhleli weFroala
I-Froala WYSIWYG Umhleli we-HTML ineendlela zokhuselo olomeleleyo ngokuchasene nokuhlaselwa kwe-XSS. Kwiimeko ezininzi, awuzukuba naxhala kwaphela malunga noku, kodwa sicebisa ukuba wenze ezinye iitshekhi kwiseva yakho.
Kunye nokuxhasa Zonke iimpawu ze-HTML, umhleli uguqulelwe kwiilwimi ezingama-34 ezahlukeneyo, unenkxaso ye-RTL ngokufumanisa ngokuzenzekelayo, kunye nokuKhangela okuPelileyo.
UFroala unayo Plugin WordPress ukudibanisa umhleli kwindawo yakho yeWordPress.
Zama iFroala's Online HTML Editor Khuphela iFroala
tags: umhleliumhleli okhawulezayohtml umhleliumhleli wombhalo osisityebiumhleli wombhaloumhleli wegamalwenshyaumhleli weWywwg